Maseneta eUS Vanoda Kumanikidza Makambani eTekiniki Kuti Ape "Zviri Pamutemo Kupinda" Ruzivo Rwakanyorwa | Linux Vakapindwa muropa
Yakazozivikanwa inoita zvishoma nezve danho neboka revamiriri veRepublican izvo iri kuedza kumanikidza makambani teknolojia kutevedzera "zviri pamutemo kuwana" kune yakavharidzirwa ruzivo.
Uye ndizvozvo, pakutanga kwevhiki, yakaratidza "Zviri Pamutemo Kuwanikwa kweCrypted Data Act" (Mutemo wekuwana zviri pamutemo data rakanyorwa), kudaidzira kuguma kwe "court-order-proof" kunyorera, iyo mumashoko avo, izvi zvakagara zvichitadzisa kuferefetwa kwematsotsi.
Bhiri yakaunzwa naSenator Lindsey Graham, Sachigaro weSeneti Judiciary Committee, pamwe nemaSeneta Tom Cotton naMarsha Blackburn.
Kana yakagamuchirwa, iyo Tech makambani anomanikidzwa kubatsira vaongorori kuwana ruzivo rwakanyorwa kana mupiro uyu ungatungamira kune waranti yekusungwa. Sezvo vanogadzira mutemo uye neDhipatimendi reUtongi reUS vagara vachirwira makambani ehunyanzvi pamusoro pekunyorwa.
Dhipatimendi Rezvemitemo rinoti kupora kunodzivirira kuti vaongorori tora humbowo hunodiwa yemidziyo yevaifungidzirwa uye yakumbira makambani makuru ehunyanzvi kuti ape "mukana wepamutemo," kiyi yekunyora dhizaini iyo yaisazowanikwa chete pakukumbira kwemapurisa. FBI yakaita chikumbiro chakafanana kuApple muna2016 payakada data kubva ku iPhone yegandanga rakafa mushure mekupfurwa kwevanhu vakawanda muSan Bernardino, California.
Asi tekinoroji nyanzvi nevatsigiri vezvekuvanzika vanyevera kwenguva yakareba kupesana nekutumirwa kweyekunze yekuvharira, vachipokana kuti Mhinduro yakadai ine njodzi kudarika yainobatsira.
End-to-end encryption inodzivirira mabhirioni avanhu kubva kune vanobiridzira, hurumende dzinodzvinyirira, kana kunyange vanobatana pakati nekupa matanho ekuchengetedza ayo makambani pachawo asingakwanise kudarika, zvirinani mune dzidziso. Kugadzira nzira yekuti vaongorori vawane iyi data kunosimudzira kunetseka kwekuti ma hackers nema cybercriminals vanogona kutora nzira iyi futi.
Bhiri haridi zvakajeka kumakambani eetekinoroji kugadzira musuwo wekumashure, kutaura kuti Gweta Guru rinorambidzwa kupa matanho chaiwo ekuti makambani eetekinoroji anofanira kutevedzera sei mvumo yekuwana zviri pamutemo.
Bhiri Iyo zvakare inobvumidza tech makambani anogamuchira chikumbiro chekukwirira mudare redzimhosva zvinosiyana kana kudzima maodha.
"Maonero angu akajeka: kana mapurisa awana mvumo yekumatare inodiwa, makambani anokwanisa kutora ruzivo kuvabatsira mukuferefeta kwavo," akadaro Graham muchitauriri.
“Mutemo wedu unoremekedza uye unodzivirira kodzero dzekuvanzika dzevanhu vekuAmerica vanoteerera mutemo. Inoyambira zvakare magandanga nematsotsi kuti havachakwanise kuvanda kuseri kwetekinoroji kuvhara nzira dzavo.
Bhiri inobvumirawo kune Gweta Guru kuvhura makwikwi ane mubairo we chero munhu anogonatsvaga nzira yekuwana iyo yakavharidzirwa data apo uchichengetedza zvakavanzika uye chengetedzo. Nyanzvi dzekuchengetedza dzakagara dzichiona kuti ichi chaive chikumbiro chisingaite.
Bhiri iri harisi rekutanga kuedza congressional kushaya simba marongero e crypto muUnited States.
Kubva munaKurume, Graham pamwe nebipartisan boka remaseneta vakaunza EARN IT, iyo yaigona kubvisa chikamu 230 chekudzivirira kwepamutemo kumakambani ehunyanzvi kana vakaramba vachibatsira kuchengetedza vana vanobata chibharo nemidziyo senge encryption.
Dhipatimendi reJustice rakashora makambani ehunyanzvi seApple neFacebook yekutora magumo-kusvika-kumagumo kunyorera, kutaura kuti tekinoroji inodzivirira magandanga uye vanobata chibharo.
MunaMay, FBI yakati yaive ne "dambudziko reApple," ichiti kambani yakaramba kubatsira kuvhura iPhone yemagandanga panguva yekurwiswa kwe2019 pachiteshi chengarava muFlorida.
Apple yakange isina chekutaura, asi yakati muna Chivabvu yakanga yabatsira kuferefeta kweFBI "munzira dzese dzinobvira."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Maseneta eUS anoda kumanikidza makambani eetekinoroji kuti ape "zviri pamutemo kuwana" ruzivo rwakanyorwa